कोरोना संक्रमितका लागि भनिएका यी औ’षधि चिकित्सकको परामर्श बिना से’वन नगर्नुस् – eSidhakura
तातोपानी आइपुग्यो चीनबाट व्यापारीले ल्याएको अक्सिजन सिलिन्डर
४० seconds अघि
मुख्य पृष्ठसमाजकोरोना संक्रमितका लागि भनिएका यी औ’षधि चिकित्सकको परामर्श बिना से’वन नगर्नुस्
कोरोना संक्रमितका लागि भनिएका यी औ’षधि चिकित्सकको परामर्श बिना से’वन नगर्नुस्
कोभिडको दोस्रो लहर नेपालमा फैलिएसँगै यस सम्बन्धी मिथ्या सूचनाहरु सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेरि फैलिन थालेका छन्। केही दिन यता विभिन्न औ’षधिका नाम र तिनका तस्बिर ह्वा’ट्सएप ग्रुप, म्यासेन्जर र फेसबुक मार्फत शेयर गरिएका छन्।
‘को’भिड ट्या’ब्लेट’ भन्दै शेयर गरिएको उक्त सूचीमा औ’षधिहरुको नामका साथै तिनलाई से’वन गर्दा लिने मात्रा पनि उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँको मनमैजुस्थित संयुक्त फा’र्मेसीका सञ्चालक रमेश लामिछानेका अनुसार त्यस्तो सूची लिएर औ’षधि खरिद गर्न मानिसहरु उनकाे पसलमा आउने गरेका छन्।
“३-४ दिनमा करिब ६-७ जना व्यक्ति एकै किसिमको औषधिको सूची लिएर आए। पहिले त मैले कुनै डाक्टरले नै सिफारिस गरेको औ’षधि होला भन्ने सोचेँ तर पछि मेरै एक आफन्तले मलाई फोटो पठाई यो औषधि फेसबुकमा देखेको सही हो कि हैन भनेपछि पो थाहा पाएँ,” लामिछानेले भने।
लामिछानेले त्यसपछि त्यस्तो सूची लिएर आउनेलाई औ’षधि नदिएको साउथ एसिया चे’कलाई बताए। उक्त सूचीमा ७ किसिमका औ’षधिहरु छन्। ती औ’षधिको नाम र तिनको प्रयोग यस प्रकार छन्:
यी औ’षधिमध्ये जि’ङ्कोभिट, लि’म्सी र से’लकाल भिटामिन र पाे’षण पुरक औ’षधिहरु हुन्। डोक्सी र ए’जीथ्रल ए’न्टिबायोटिक (औ’षधि जसले शरीरमा रहेका हा’निकारक ब्याvक्टेरियाहरूलाई न’ष्ट गर्दछ वा तिनीहरूको विकास सीमित गर्दछ) हुन् भने डो’लो ज्व’राेको र इvभरमेक्टीन जुकाको औ’षधि हो।
भिटामिन र पाे’षणदायक औ’षधिहरु को’भिड-१९ का बि’रामीका लागि उपयोगी हुनसक्ने भएतापनि त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन। त्यसैले यी औ’षधि चिकित्सकको सल्लाह र सुझाव अनुसार प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने हा’र्वर्ड मेडिकल स्कुलले प्रकाशित गरेको एक लेखमा जनाइएको छ।
यसैगरी सा’इन्सन्युजमा प्रकाशित एक लेखमा भिटामिन सि, डि र जिन्कको कमी भएका को’भिड संक्रमितलाई मात्र यी द’बाइले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पुरक औ’षधि साधारणतया सुरक्षित भएतापनि इ’न्फेक्सनबाट बच्न चिकित्सकको सल्लाह अनुरुप प्रयोग गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी उक्त सूचीमा दुइवटा ए’न्टिबायोटिक पनि छन्। अमेरिकी स्वास्थ्य सम्बन्धी वे’बसाइट हेल्थलाइनका अनुसार ए’न्टिबायोटिक गलत तरिकाले प्रयोग गरेमा फाइदा भन्दा हा’नि बढी गर्दछ। ए’न्टिबायोटिकले ब्या’क्टेरियालाई उपचारको लागि प्रतिरो’धात्मक बनाउन सक्छ भने यसले प्रतिरक्षा को’शिकालाई क्षति पुर्‍याउँछ र हाम्रो शरीरका सेतो र’क्त को’शहरूको क्षमतामा ह्रास ल्याउन सक्छ।
यसैगरी अमेरिकाकाे सेन्टर्स फर डिजिज क’न्ट्राेल एण्ड प्रि’भेन्सन (सि’डिसि) का अनुसार जरुरी नभई ए’न्टिबायोटिक प्रयोग गर्नाले हा’नि गर्दछ। अ’नियन्त्रित ए’न्टिबायोटिकले झन् बढी बि’रामी बनाउन सक्ने वा अन्य असर गर्न सक्ने सि’डिसिले उल्लेख गरेको छ। यसै कारण सि’डिसिले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र ए’न्टिबायोटिक प्रयोग गर्न र अरुलाई सिफारिस गरिएको ए’न्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न सुझाएको छ।
“यी औ’षधिहरु डाक्टरको सल्लाह बिना आफै से’वन गर्दा धेरै नराम्रो असर गर्नसक्छ,” काठमाडौँस्थित शिक्षण अस्पतालका रे’जिडेन्ट डाक्टर अरुण उप्रेतीले साउथ एसिया चे’कलाई बताए। “यसरी जथाभावी ‍औ’षधि से’वन गर्दा ती दबाइ चाहिने बि’रामीलाई मार पर्ने र बजारमा स’र्टेज हुनसक्छ।”
डा. उप्रेतीका अनुसार अस्पतालमा चिकित्सकको नि’गरानीमा को’भिड-१९ संक्रमितलाई यस्ता केही ‍औ’षधि चलाउनु स्व’भाविक भएता पनि बिना परामर्श से’वन गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै डा. कल्याण सुवेदीले आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्दै डाक्टरले ‘प्रि’स्क्राइब’ गरेको बाहेक अन्य औ’षधि नखान सुझाएका छन्।
उनले भनेका छन्, “त्यो औ’षधिको लिस्टको पछि नलाग्नु होला। ज्वरो आउँदा जुनसुकै ज्वरो घटाउने औ’षधि र खोकी लाग्दा खो’की कम गर्ने औषधि भन्दा अरु केही खानु पर्दैन।” यसरी चिकित्सकको परामर्श बिना कुनै पनि औषधि लिनु अनुपयुक्त वा हा’निकारक हुनाले सामाजिक सञ्जालमा फै’लिएको को’भिड औ’षधिको सूची भ्रामक भएको ठ’हर हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ४२ हजार बढी सक्रिय संक्रमित
पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा अ’तिक्र’मणमा, निषेधाज्ञामा पनि धमाधम घर टहरा निर्माण हुँदै
विवाहको दुई दिनपछि बेहुला-बेहुलीलाई नै कोरोना संक्रमण